PressReader - Isolezwe: 2017-09-15 - Uhulumeni akaqale alungise isimo esibheda manje
Uhulumeni akaqale alungise isimo esibheda manje
Isolezwe - 2017-09-15 - IMIBONO -
NJENGAMANJE eNingizimu Afrika kukhulunywa ngokuguqulwa komnotho okunqala ngoba kuthiwa lokhu kuzolekelela ukuthi babe baningi abantu ababa nesandla ekuthuthukisweni komnotho futhi kwande nabahlomulayo ngomnotho wezwe.
Lolu guquko kuthiwa kufanele luqikelele ukuthi kuyaphela ukuthi kube yidlanzana lezinkampani elikhonyayo emikhakheni ethize. Lokhu kungenxa yomlando wezwe ngoba abantu abamnyama babencishiwe amathuba okufaka isandla kwezinye izinhlaka zomnotho. Nakuba sivuma ukuthi luyadingeka lolu shintsho kodwa singajabula uma uhulumeni engaqale agxile ekulungiseni lezi zinto esizithatha ngokuthi akusafanele ngabe zisayinkinga nanokukhombisa ukuthi uqinisile uma ethi uzimisele ngokusiza osomabhizinisi abancane nabamnyama nanokwandisa isibalo sosomabhizinisi kuleli.
Kuleli sonto siphinde sabika ngosizi olubhekene nabasebenzi abaqashwe yiMusic House KZN oselokhu bagcina emsebenzini ngoFebhuwari kodwa akucaci ukuthi basaqashiwe noma kwenzekani ngalesi sikhungo. Lesi sikhungo sasungulelwa ukuthuthukisa amaciko KwaZuluNatal kodwa alikho iciko elikhona elibonakalayo elingasho ngeqholo lithi lilekelelwe yiso. Amaciko angabanye babantu abayingxenye yosomabhizinisi abancane njengoba bezisebenza, uma beqashiwe kuba ngokwesikhashana.
Kubi lokhu osekwenzeka kulesi sikhungo njengoba wonke umuntu ezihlangula ngaso futhi kungacaci ukuthi imali eyahlinzekwa ngayo yashonaphi, yasiza bani okungathiwa namanje usaqhubeka futhi uyadlondlobala ngenxa yosizo lwaso. Kumanje kunabantu abangakwazi ukondla imindeni yabo kusukela ngoFebhuwari ngenxa yalesi sikhungo okucacayo ukuthi ikusasa laso limfiliba.
Njengoba izinga lokungasebenzi liphezulu kuleli, sivumela kanjani ukuthi kube nesikhungo sikahulumeni okuphelayo kanjalo ngaso ekubeni sidingeka kodwa lo hulumeni ebe ethi uphokophele ukuletha uguquko olunqala kwezomnotho? Ngaphambi kokugagamelela ukwethula uguquko olunqala kwezomnotho, ake uhulumeni agxile ekulungiseni lezi zinto okumanje ubhekene nazo ukuze sibone ukuthi uzimisele ngempela ngokufukula osomabhizinisi abamnyama.